Matsiatra Ambony, Menabe, Anosy, Vakinankaratra…: mirongatra indray ny Covid-19, maherin’ny 40 ireo tranga vaovao | NewsMada
Matsiatra Ambony, Menabe, Anosy, Vakinankaratra…: mirongatra indray ny Covid-19, maherin’ny 40 ireo tranga vaovao
Par Taratra sur 19/11/2021
Misoko mangina ary mandady…. ny valanaretina. Nahitana tranga vaovao sy “cas graves” avokoa ny faritra dimy, manomboka eo Vakinankaratra, mianatsimo iny. Naka fanapahan-kevitra avy hatrany ny eo anivon’ny filankevitry ny minisitra, manoloana izany rehetra izany.
Tsy re tsaika ary manomboka mampanahy fa efa maherin’ny 40 ireo tsy afa-bela izao. Nahitana tranga iray tamin’ny alalan’ny olona iray namita iraka ny tany Ambovombe Androy, omaly. Efa natoka-monina avy hatrany ilay tratran’ny Covid-19. Any Matsiatra Ambony kosa, roa ireo tranga anaty fahasarotana ao amin’ny hopitalin’i Fianarantsoa amin’ireo fito nifindran’ny valanaretina ka efatra tsaboina any an-trano, araka ny tatitry ny governora, Razafindrafito Lova. Namoaka tatitra kosa ny talem-paritry ny fahasalamam-bahoaka any faritra Anosy, fa ahitana tranga roa any an-toerana ary mihiboka ao an-tranony izy ireo, amin’izao fotoana izao.
Fifandirana amin’ny mpanao gazety
Ankoatra ireo, efa herinandro maromaro izao ny fihanaky ny valanaretina any Menabe ka nanakatonana sekoly noho ireo mpianatra, tratran’ny coronavirus. Olana koa anefa ny fifandirana eo amin’ny mpanao gazety any an-toerana sy ny tompon’andraikitra ao Morondava amin’ny famoahana ny vaovaon’ny Covid-19. Miandrandra mangarahara rahateo ny mponina any Menabe.
Tahaka izany koa ny ao amin’ny faritra Vakinankaratra. Efa nahitana tranga fahasarotana miisa valo sy tranga vaovao any an-toerana, ny herinandro lasa teo.
Etsy andaniny, mangina tanteraka ny eo anivon’ny minisitera tompon’andraikitra, indrindra ny eny anivon’ny hopitaly. “Tranga roa na telo isan’andro ny eto aminay. Ireo tonga avy any ivelany ny maro amin’izy ireo”, hoy ny loharanom-baovao iray avy etsy amin’ny Village Voara Andohatapenaka. Nanteriny fa tsy mifanalavitra amin’izany ny hita amin’ireo hopitaly lehibe, eto an-dRenivohitra.
Hiato ny sidina mampitohy an’i Maorisy
Hatreto izany, maherin’ny 40 ireo tranga vaovao, nanomboka ny 3 hatramin’ny 10 novambra teo, araka ny tatitry ny OMS.
Mifandray amin’izany ny fanapahan’ny filankevitry ny minisitra, ny alarobia teo, fa hiato amin’ny 27 novambra izao ny sidina ana habakabaka, mampitohy an’i Madagasikara sy ny Nosy Maorisy. Anton’izany fepetra izany ny firongatry ny valanaretina Delta any an-toerana tao anatin’ny fotoana fohy.
Synèse R. sy Tatiana